Izimbangela zezinkinga kakhulu ngokwengqondo kuyinto azisho lutho: okuhlangenwe nakho ngokomzwelo ebuntwaneni. Namhlanje ukutshela mayelana izinkinga ezingokwengqondo ukuthi sekukhona ngenxa yokuziphatha ezibonakala evamile yabazali.
Ukukhathazeka, ukucindezeleka, ukungakwazi ukuba azimele
Abanye abazali bacabanga ukuthi kufanele njalo unake ingane yakho, kungakhathaliseki indlela iminyaka eminingi. Noma kunjalo, ungacabangi ukuthi overprotection ngokuvamile kuholela ezinkingeni ezingokwengqondo. Uma ungakwazi ukwenza isinqumo esibalulekile ngaphandle kokubonisana nabazali, kusho ukuthi nawe ungomunye lezi zingane.
Izejwayezi ezimbi kanye nogqozi for emidlalweni eyingozi
Uma abazali njalo nje bexoxa ingane yakho ukuthi idala izinkinga eziningi, khona-ke ngokushesha noma kamuva wayezokuza esiphethweni sokuthi ngaphandle kwakhe kungaba ngcono. Ngenxa yalokho, ingane ikhula ibe umuntu omdala othola izindlela unganakile ukubhubhisa ngokwayo ngokusebenzisa utshwala, ukubhema, izidakamizwa noma emidlalweni eyingozi.
"Timisele!" "Misa goofing off!" "Ungabi ingane!" Imfundo enjalo kuzoholela iqiniso lokuthi ingane iyokhula futhi zibe zimbi nakakhulu futhi indoda abangakwazi uphumule ngokugcwele, izingane azikwazi ukuqonda futhi uzonde abantu beya.
Ukuzenyeza, isifiso ukulingisa umuntu
Abazali ababekela qhathanisa ingane yabo nge ngaphezulu "abanolwazi" izingane bazothola osemusha ezilahlayo futhi kamuva omdala umuntu ukuzibona ngiyisiphukuphuku. Ngeke uzama ukwenza yonke into njengoba engcono ngangokunokwenzeka futhi siyaluzonda ngokwami ngenxa yokuhluleka.
Izinkinga empilweni yakhe siqu
Abazali abazithanda njalo nokuqapha ingane futhi musa ukumethemba, uzokwazi ukuletha umuntu uyoqonda ukuthi umhlaba wakhiwe yinhlanganisela yisicupho umphatha ubutha. Lokhu omdala uyophinde banezinkinga ezingathí sina ngokuzethemba.
Ukucinga usizo lwabazali
"Uneminyaka usemncane kakhulu ngalokho!" - lokhu kuyindlela ephelele ukukhulisa umuntu ngisho lapho usukhulile abe ingane. Mhlawumbe, uyolokhu 'incane kakhulu ", akukwazi ezimele, njalo ephendukela abazali usizo.
I ukunganaki kwakhe futhi eyenza, izinkanuko elimazayo
Uma abazali bavame ukusebenzisa imishwana enjengethi, "Musa uthole smart!" Noma "Misa emafwini!", Izingane zabo ngeke ube umbono womuntu siqu, noma iyiphi isinyathelo noma ubuholi izimfanelo. Njengoba abadala, kungenzeka minza izifiso zabo utshwala futhi kumnandi.
Nezimfihlo, ukungabi imizwelo
Ukungabi imizwelo futhi nozwela abazali ingane izizwa ezingeni esesimweni sokungaphili ngokuphelele. Uma uvame ukusho ukuthi wayeka ukukhala futhi ikhononda, ingane uvala ngokwako. Lezi imizwa ukuyiveza ungavula nezinkinga zengqondo.
"Thina wathuthukisa konke iziqu!" Umuzwa wecala ongafanele kungaphezu ingane. Kuyefana nasendleleni ezisongela izilinganiso abampofu - ingane ukungezwani njalo.
Ukungabi uzibuse, ngokungacabangi, passivity
Kukhona abazali Paranoid kakhulu abangafuni ake ingane yabo esisodwa. "Ningathinti cat! Lizokuthola bhala! "" Musa ukuhlala phezu onqenqemeni, wehluleke! "La mazwi wenze ingane besaba ukuthi bazokwenza isinqumo. Ngenxa yalokho, kuphindze kutfutfukise likhono passivity futhi ngokungacabangi.
Iphethini emfundweni - kungcono ... imithetho imfundo Jikelele
Izinhlobo zombuso nezinhlobo zawo njengesisekelo sokufaniswa kwezomthetho
Imithi engamakhambi. Neurodermatitis. Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu.